GOOD NEWS: KIA NIH RALHRANG RALTUKNAK TLAK LAK IN AN KAH – The Chinlung Post
Thawngpang ttha taktak si. Ralhrang kawlralkap raltuknak helicopter pakhat cu KIA hriamtlai nih an kahthlak tiah thawngthanhnak an tuah. Hi konghe pehtlaiin khuami nih tuni April nithum ahachimmi cu KIA nih ralhrang kawlralkap raltuknak helicopter pakhat an kahthlak tiahachim. Moemoh myo, khuathar Kungla timi khuate ahacangmiasi.
Kawlca in reladuhmi nih:အာဏာသိမ်းစစ်တပ် လေယာဉ် ၁ စီးကို KIA ပစ်ချလိုက်ကြောင်း ဒေသခံများဆို. May 3, 2021/ Kachin News Group. မိုးမောက်မြို့နယ် မြို့သစ် ကုန်းလော ကျေးရွာအရှေ့ဘက်ရှိ စလောင်းကုန်းတွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခန့်က အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က လေယာဉ် ၂ စီးဖြင့်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာ လေယာဉ် ၁ စီး ပစ်ချခံလိုက်ရကြောင်း ဒေသခံများ ပြောသည်။ ဒီမနက် ၉နာရီလောက်ကနေ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်ဘက်က လေယာဥ် ၂စီးနဲ့လာပစ်တာကို တစ်စီးက ထိသွားတယ်လို့သိရတယ်။ မီးခိုးနဲ့ပြာကျသွားတယ်တဲ့။